Ciidanka XDS oo deegaanka Baladul-Amiin ku qabtay hub iyo waxyaabo Qarxa.+Sawiro – Radio Muqdisho
Ciidanka XDS oo deegaanka Baladul-Amiin ku qabtay hub iyo waxyaabo Qarxa.+Sawiro
Ciidamada Kumaandooska Danab ee Ciidanka Xoogga ee shalay Al-shabaab kala wareegeay degaanka Baladul-Amiin oo hoostaga Degmada Walaweyn ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa gacanta ku dhigay Kartoonno lagu xareeyay qaraxyo iyo hub Maleyshiyadka Al-shabaab ugu jiray guri ku yaala degaankaasi.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka ayaa Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA u xaqiijiyay guulahaasi ay gaareen ciidamada Dowladda, gacantana lagu dhigay Qaraxyo iyo rasaas lagu qariyay guri ku yaala degaanka Baladul Amiin, kuwaasi oo ay Shabaabka u adeegsan jireen gumaadka ummadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale Saraakiisha kumaandooska Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in Ciidamada kumaandooska ay gacanta ku dhegeen taleefanno nabadiidka Al-Shabaab ay u isticmalaan weerarrada qaraxyada ay ku xasuuqaan dadka shacabka ah.
Howlgalladani oo ah kuwo qorsheysan ayaa ujeedkoodu yahay sidii Alshabaab looga saari lahaa guud ahaan meelaha ay kaga sugan yihiin gobollada Dalka Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta iyo bartamaha Soomalaiya oo ah halka ay ku dhuumaalaysanayaan.
Howlgaladaasi dhulka ah waxaa dhinac socda duqeymo xagga Cirka ah oo lagu beegsanayo horjoogayaasha Shabaab, waxaana duqeyntii ugu dambeysay lagu dilay horjooge ka tirsanaa Daacishta ku sugan Buuralayda gobolka Bari ee Puntland.